Minista na-ahụ maka njem nleta n’Indoneshia: Nke a na-echegbu anyị!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Minista na-ahụ maka njem nleta n’Indoneshia: Nke a na-echegbu anyị!
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • investments • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Minister of Tourism and Creative Economy, Wishnutama Kusubandio, na-aza ozi kachasị ọhụrụ nke ụmụ amaala Indonesia abụọ bụ ndị ekwuru nke ọma maka coronavirus. Dị ka Minista ahụ si kwuo, a ga-emejuputa mmemme mkpali nke mpaghara ndị njem maka ndị njem si mba ọzọ rue mgbe ntiwapụ COVID-19 belatara ma ọnọdụ ahụ laghachịkwa.
Onye ozi ahụ kwuru na Jakarta na Mọnde (2/3/2020) na ihe kachasị mkpa n'oge ọnọdụ a bụ ịhazi njikwa na atụmanya iji gbochie mgbasawanye.
Onye ozi ahụ nwere nchegbu dị ukwuu banyere ntiwapụ nje na-arịwanye elu bụ nke ebugoro na Wuhan, China. A nwalere ụmụ amaala Indonesian abụọ ọfụma maka coronavirus yana kwa ndị mbụ Covid-19 na mba ahụ.
"Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-elekwasị anya na mmemme nke ijikwa ndị njem nlegharị anya bụ ndị batara na Indonesia mgbe oge mgbasa nje malitere, na-abawanye ogo nke ebe ndị njem na-elekwasị anya na nkwado gburugburu ebe obibi, ahụike, ịdị ọcha, nchekwa, na nchekwa," ka Minista ahụ kọwakwuru. .
Ministri na-ahụ maka njem nlegharị anya na imepụta akụ na ụba ugbu a na-enyocha mmepe nke gburugburu ebe obibi ihe nkiri na gburugburu coronavirus ntiwapụ na Indonesia.
“Anyị chọkwara igosipụta ọmịiko n’ebe ụmụ amaala abụọ ahụ nọ bụ ndị a nwalere nke ọma maka coronavirus. Olileanya, mmadụ abụọ bi na ndị butere na coronavirus nwere ike gbakee, ”kwuru Wishnutama.
Ọ kọwakwara na gọọmentị ugbu a nwere SOP nwere ụkpụrụ mba ụwa ma nwee oke ego emere maka ego iji dozie nsogbu ndị a.
O kwuru, sị: "Nke a abụghị naanị iji chekwaa nchekwa na ahụike nke ụmụ amaala Indonesian niile, kamakwa ọ na-enye aka na njem nlegharị anya nke Indonesia, nke nwere ike ịnwe ọnọdụ, nghọta, na nsogbu," ka o kwuru.
Ministri nke Njem Nleta na Ego Ego na-aga n'ihu ịhazi na Ministri Ahụike na ndị ọzọ metụtara ya iji nyochaa mmepe nke coronavirus ugbu a.
“Anyị na-agba ndị njem nleta na obodo ume ka ha nwee ezi ahụike na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, yana ịmalite usoro ndụ ndụ siri ike dịka ntuziaka gọọmentị si dị,” ka ọ gara n'ihu.
E wezụga ijikwa na igbochi coronavirus, Mịnịsta ahụ ghọtara mkpa ọ dị iji jigide nkwado akụ na ụba nke mba maka gọọmentị. Ihe mkpali maka ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya ụlọ ka na-aga n'ihu yana nlekota ya ka na-aga n'ihu.
“Ndị ọchịchị na-ana achi achi na coronavirus ikpe njikwa a kwadebere. Dị ka ọmụmaatụ, ihe karịrị 100 ụlọ ọgwụ a kwadebere na iche ụlọ banyere coronavirus na mma iche ọkọlọtọ na-onwem na ezigbo equipments dị na mba ụkpụrụ, ”o kwuru.
Wishnutama zigakwara arịrịọ na ndị njem nleta na-eleta ebe ndị njem na-elebara ahụike ha anya mgbe niile dị ka idebe ihe ọcha, ịsa aka ha, imeziwanye usoro ahụ ji alụ ọgụ, na ị hea ntị na ntụpọ / arịrịọ sitere n'aka gọọmentị mpaghara. Ọzọkwa, ị na-emelite na ozi gbasara ụlọ ọgwụ na-eme njem gburugburu ebe njem.